Tuesday September 15, 2020 - 10:00:26 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ururka Ikhwaanul Muslimiin ee ka jira wadanka Masar ayaa ku dhawaaqay in uu yeeshay hoggaan cusub kadib sanado uu Ururkaas lakulmayay guuldarrooyin siyaasadeed oo waaweyn.
Ibraahiim Muniir ayaa noqday hoggaamiyaha Ikhwaanul muslimiin
Bayaan uu soo saaray Afhayeenka rasmiga ah ee Jamaacada Ikhwaanul Muslimiin ayaa lagu sheegay in Hoggaamiyaha Ururka loo magacaabay Ibraahiim Muniir oo muddo sanada ah ku magacaawnaa guddoomiye ku xigeenka Ururka.
Dabayaaqadii bishii Agoosto ee lasoo dhaafay ayay ciidamada Sirdoonka dowlada Cabdi Fataax Alsiisi waxay bariga magaalada Al Qaahira ku qabteen Maxmuud Cizat oo ahaa sii hayaha murshidka guud ee Ikhwaanul Muslimiin.
Tan iyo markii uu Alsiisi Inqilaabka kula wareegay talada dalka Masar sanaddii 2013 ayuu Ururka Ikhwaanul Muslimiin wajahayay cadaadis dhan walba waxaana xusid mudan in inta badan hoggaamiyaashii Ururka Jeelasha lagu guray halka qaarkood xukunno daldalaad ah lagu fuliyay.
Ururka Ikhwaanka oo kamid ah Ururada Islaamiga ah ee ugu facaweyn dalka Masar ayaan wali kasoo kabay jabkii kasoo gaaray qamcintii nidaamka calmaaniga ah, dhibaatada Ururkan gaartay ayaa timid kadib markii uu ka leexday wadada xaqqa ah uuna ka bayray Jihaadka oo ahdaaftii loo aas aasay ay kamid aheyd.
Gacan ku dhiiglihii Muslimiinta ku laayay dalka New Zealand oo maxkamad lasoo taagay.
Khaliifa Xaftar oo diiday in uu u hoggaansamo Heshiiskii Xabad Joojinta dalka Liibiya.